कतारको नयाँ क्वारेन्टाइन मापदण्डबारे जान्नै पर्ने कुरा ! – Yuwa Aawaj
कतारको नयाँ क्वारेन्टाइन मापदण्डबारे जान्नै पर्ने कुरा !
असार २६, २०७८ शनिबार 127
दोहा : कतारले नयाँ यात्रा नीति जारी गरेको छ। नयाँ मापदण्ड अनुसार को’भिड–१९ वि’रुद्ध खोपको पूर्ण मात्रा लगाएका नेपालीलगायत विदेशी नागरिकले कतार प्रवेश गरेपछि क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने छैन।
कतारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले बेइजिङ इन्सिच्युटले उत्पादन गरेको खोप बीबीआइबीबी–कोर्भ/सिनोफार्म र सिनोभ्याक बायोटेकले उत्पादन गरेको कोरोना भ्याक/सिनोभ्याकलाई भने सशर्त स्वीकार गरिने बताएको छ। यी खोप प्राप्त गरेका यात्रीको लागि कतार प्रवेशसँगै एन्टीबडी परीक्षण अनिवार्य गरिएको छ।
एन्टिबडी परी’क्षणमा पो’जेटिभ देखिए क्वारे’न्टाइनमा बस्नुपर्ने छैन। अन्यथा निर्दिष्ट गरिएअनुरुप क्वारेन्टाइन अवधि पूरागर्नु पर्नेछ। कतार प्रवेश गर्नुअघि ७२ घण्टाभित्र गरिएको पीसीआर परीक्षणको ने’गेटिभ रिपोर्ट साथमा हुनु पर्नेछ।
‘ग्रीन लिस्ट’ मा परेका मुलुकबाट कतार प्रवेश गर्ने ग’र्भवती, सुत्केरी एवं ७५ वर्षमाथिका व्यक्तिलाई समेत पाँच दिन अनिवार्य ‘होम क्वा’रेन्टाइन’ मा रहनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ। त्यस्तै, कतार एवम् क्यूआईडी (कतारी आइडी) प्राप्त तथा जीसीसी (गल्फ कर्पोरे’शन काउन्सिल) का नागरिकको
सन्दर्भमा यदि को’भिडवि’रुद्ध स्वीकृतीको पूर्ण मात्रा लिएका वा पछिल्लो नौ महिनामा कोभिड निको भइसकेको खण्डमा कुनै किसिमको क्वा’रेन्टाइनको आवश्यकता नपर्ने बताइएको छ।
यस्तै, ४ वर्षदेखि १७ वर्षसम्म किशोरकिशोरीले भ्याक्सिन लगाएका छैनन् र कतार फर्कदैं छन् भने उनीहरूले पनि आफ्नो भ्याक्सि’नेटेट अभिभावक मध्ये १ जना सँगै होटेल क्वारेन्टाइनमा बस्नु पर्नेछ। ‘ग्रीन जोन’ मा पर्ने देशका नागरिकले ५ दिन होम क्वारेन्टा’इनमा बस्नुपर्ने। चौथो दिनमा आरटी पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्नेछ ।
नेगेटिभ नतिजा आएमा पाँचौं दिनमा डि’स्चार्ज । ‘एल्लो जोन’ मा पर्ने देशका नागरिकले ७ दिन होटेल क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने। आफ्नै खर्च लाग्नेछ । छैठौ दिनमा होटेलमै आरटी पीसीआर प’रीक्षण गर्नुपर्नेछ । रिपोर्ट नेगे’टिभ भएमा सातौं दिनमा डिस्चा’र्ज।
‘रेड जोन’ मा पर्ने देशका नागरिकले १० दिन होटेल क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने। सुरुमै आरटी पीसीआर प’रीक्षण गर्नुपर्नेछ । नवौ दिनमा पुनः आरटी पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्नेछ । नेगेटिभ रिपोर्ट आएमा दसौं दिनमा डि’स्चार्ज ।
त्यस्तै, ‘रेड लिस्ट’बाट प्रस्थान गर्ने खोप खोप लगाएका यात्रुले पनि प्रस्थानसँगै विमानस्थल तथा सीमानाकामा आफ्नै खर्चमा आरटी पीसीआर परिक्षण गर्नु पर्नेछ । यदि पो’जिटिभ रिपोर्ट आएमा आइ’सोलेसन प्रो’टोकल अपनाउनुपर्ने बताइएको छ।
Prev२०२१ जुलाई १० शनिबारको अन्तर्राष्ट्रिय उडान तालिका हेर्नु’होस !
Nextअब कतार जाने यात्रुले सु र्तीजन्य पदार्थ लैजान नपाउने ।
असार १४ पछि सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा आउने ।
अनिता खड्काले निशा घिमिरेलाई यसरी दिइन भिडियो सन्देश ।(भिडियो सहित )
ग्याष्ट्रिकको अचुक औषधी हो मेथीदाना,यसरी प्रयोग गर्नुहोस, बिधि सहित। (5837)